Rainbow Magic | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! Rainbow Magic | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
Nature bụ mgbe mara mma nke ukwuu na e nweghị onye na ụwa a na-adịghị n'anya na-na-gbara ya gburugburu mara mma ubi na Okirikiri ala. Rainbow Magic na-a egwuregwu dabeere dị otú ahụ a ebube isiokwu. na nke a mkpụrụ cha cha egwuregwu online oghere, i nwere ike na-egwu na a 3×3 esi anwụde format na-eme ka ụzọ nke na-emeri site ise ifịk nzọ edoghi. The-esi anwụde ebe a na-setịpụrụ na n'ọhịa gburugburu lush green osisi na grasses na a yi na-egbuke egbuke egwurugwu n'elu nke elu-igwe. E nwere akụkọ ifo music na-agba ọsọ na ndabere na-agbakwụnye na a kpokọtara aka ka egwuregwu. Ókè maka ịkụ nzọ ebe a na-amalite na 25p na na gị kechioma ụbọchị, i nwere ike ya kacha nke £ 100 a atụ ogho.
Banyere Mmepụta nke Rainbow Magic
Nke a kpokọtara ọhụrụ mkpụrụ cha cha egwuregwu online oghere e kere site onye ọzọ karịa Ziri Ezi. Dị ka aha ha na-atụ aro, ha na-ewu ewu na-eme ọ bụla egwuregwu anya n'ezie na-abịa kwajuru na-akpali akpali atụmatụ iji nyere Player ime ezi uru. Ha bụ otu n'ime n'elu iri cha cha egwuregwu suppliers na ụwa.
The nnọchianya nke a mkpụrụ cha cha egwuregwu online oghere anya nnọọ yi na-egosipụta dị ịtụnanya animated na mmetụta na-na-emeri. E nwere nnukwu ite jupụtara na oké ọnụ ahịa gold mkpụrụ ego, a mara mma obere akụkọ, klova epupụta, red ero pods, ọlaedo gosikwa mirror, odo odo butterflies na-acha anụnụ anụnụ crystal shards. The ite nke gold bụ ihe nnọchianya na-enyere gị merie ndị kasị elu ụgwọ ọrụ. Na atọ nke ya gafee ifịk payline, i nwere ike imeri 250x on gị ngụkọta wagered ego na otu atụ ogho. A nnukwu gold mkpụrụ ego na yi ụkpụrụ ya bụ bonus-enyere gị aka imeri enwekwukwa ụgwọ ọrụ.
Free spins Daashi: The nnọchianya nke gold mkpụrụ ego na agba ihe karịrị ọ bụ ikposa nke a mkpụrụ cha cha egwuregwu online oghere. Mgbe ọ na-egosi na a na-emeri payline, na ị na-ọdịda iri free spins. Ị na-na-2x na nzọ gị dị ka a bonus ụgwọ ọrụ ya na ndị spins.
nzọ Multiplier: N'oge free spins, ọ bụla gold mkpụrụ ego n'ile ga Onyinye ị na ugboro abụọ gị nzọ ego. Ya mere, ndị ọzọ anya ga-amụba okpukpu abụọ gị ngụkọta winnings nnọọ n'oge free spins. Nke a multiplication na-aga n'ihu na bụla gold mkpụrụ ego anya, eme ka ị na-eme nnukwu ego.
Summary: Na a mara mma agwa isiokwu na ụfọdụ kpokọtara ịtụnanya i nwere ike imeri site, a mkpụrụ cha cha egwuregwu online oghere bụ ihe kasị mma atọ esi anwụde oghere niile oge.